Iplatifomu yeSithandathu yeHlabathi edumileyo ye-Intanethi yokusasazwa okubukhoma: i-UStream, DaCast, i-Livestream, i-Kaltura, i-Ooyala, kunye ne-Brightcove - i-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supporter Qhakamshelana: lanyue whatsapp: +2017 86 SKYPE: lanyueokera13602420401
ikhaya » iindaba » Iplatifomu yevidiyo ye-Intanethi ye-Intanethi ethandwayo yokusasazwa okubukhoma: i-UStream, DaCast, i-Livestream, i-Kaltura, i-Ooyala, kunye ne-Brightcove
Iplatifomu yevidiyo ye-Intanethi ye-Intanethi ethandwayo yokusasazwa okubukhoma: i-UStream, DaCast, i-Livestream, i-Kaltura, i-Ooyala, kunye ne-Brightcove
Umhla: 2017-05-22 / udidi: iindaba
Khumbula iimini zokuqala ze Ividiyo kaGoogle kwaye YouTube? Namhlanje, ngaphezulu kweshumi leminyaka kamva, okuninzi kuguqukile. I-YouTube yimali yezigidigidi zeedola, kwaye wonke umntu kunye nonina bayasasazwa kwiifowuni zabo. Sikwabonile ukwanda kweenkonzo zokubamba. Kule nqaku, siya kuqhuba ukuthelekiswa kweqonga levidiyo elikwi-Intanethi lowama-2017.
Kuqala, siza kujonga kumaqonga eevidiyo ezaziwa ngokuba ngabathengi kunye ne-Facebook. Emva koko, siya kuchaza umahluko phakathi kwezi nkonzo kunye namaqonga evidiyo akwi-Intanethi. Okokugqibela, emva kokuchaza indlela yethu yokusebenza, siza kungena kwiiplatifom zevidiyo ezona zithandwayo: i-UStream, i-DaCast, i-Livestream, i-Kaltura, i-Ooyala, kunye ne-Brightcove.
Iqonga levidiyo kunye nokusasazwa okubukhoma
Amaqonga athandwayo kakhulu asetyenziswayo ekwabelaneni ngevidiyo kunye nokusingatha namhlanje ngamaqonga ajolise kubathengi. Umzekelo, I-YouTube Live kunye ne-Facebook Live zizinto ezibi kakhulu. Iibhiliyoni zabantu kwihlabathi liphela zisebenzisa iinkonzo.
Ke ngoko, benza amaqonga amahle wentengiso ye-B2C kunye nokufikelela. La maqonga anceda ukuba ufikelele kubabukeli abakhulu kwaye ukhululekile ukuba ungayisebenzisa, nakwezona nkampani zinkulu.
Itekhnoloji nayo ivela kule ndawo. I-YouTube kunye ne-Facebook ngoku zombini zinikezela iinkonzo zokusasaza bukhoma. Nangona kunjalo, abaniki zininzi zeempawu ezifuneka kumashishini. Kulapho kungenelwa khona amaqonga okusasaza kweengcali.
Ibanga le-OVP yobungcali kwishishini
Amashishini afuna izinto ezinganikezelwanga yiYouTube ne-Facebook. Kukho umahluko omkhulu phakathi amaqonga e-pro kunye nenqanaba labathengi. Umzekelo, iinginginya zeevidiyo zobugcisa zinikezela ngeempawu zokhuseleko eziphambili, zenza ukuba izikimu zokwenza imali zibe nzima, kwaye zibandakanye izixhobo zokunciphisa ukudityaniswa kokuhamba komsebenzi esele wenziwe. Ezo mpawu zilungele iimfuno ze-B2B ukusasazwa bukhoma ngokusebenzayo ngakumbi kunokunikwa ngamaqonga abathengi.
Uthelekiso lweqonga elikwi-intanethi
Kulula ukufumana ulwazi malunga nawo onke la maqonga kwi-intanethi, kodwa ihlala iphelelwe lixesha. Ukufikelela kuloo nto, sibonisa isikhokelo sethu esihlaziyiweyo sonyaka we-2017. Inothelekiso lweqonga levidiyo elivelweyo nelichanekileyo elifumaneka naphi na.
Idatha kule vidiyo ye-intanethi yevidiyo yokuqhathanisa ivela kwimithombo eyahlukeneyo. Oku kubandakanya iiwebhusayithi zenkampani, uphononongo lomsebenzisi, kunye neeakhawunti zolingo zesoftware ekuthethwa ngayo. Nangona kunjalo, kunzima ukugcina yonke inkcukacha. Ukuba unenye yezi nkampani okanye ulungisa, usidubule i-imeyile okanye ushiye uluvo kwaye siyayilungisa!
I-UStream (IBM yevidiyo yefu)
Ukujonga ngokubanzi kunye nembali yenkampani
I-OVP yokuqala esiya kujonga kuyo I-UStream. Yasekwa ngo-2007 ukunxibelelanisa amalungu enkonzo yasemkhosini nosapho, i-UStream yathengwa yi-IBM ngo-2016 kwaye ngoku iba yi-IBM Cloud Video.
I-UStream yinkampani yokusasaza bukhoma okokuqala kwaye iphambili, kodwa ikwaqhuba kunye neefayile zeVOD (Vidiyo kwiDinga) zemijelo ebukhoma yangaphambili.
Iiakhawunti ezisisiseko zokusasaza simahla, kunye nentengiso exhasa i-UStream. Iiakhawunti ezihlawulweyo zisusa intengiso kwaye zinike ukufikelela kumanqaku aphambili. Iiakhawunti zeShishini zivumela uphawu olupheleleyo lokufaka uphawu kwaye linikezela ngohlalutyo, iindlela ezininzi zokuphila, ulungelelwaniso lomxholo, kunye nokunye.
I-UStream ibonelela ngenkxaso yefowuni yabasebenzisi bePro kunye nabakwaShishini, kunye nenkxaso esekwe kwiforum yabasebenzisi basimahla.
Ividiyo yefu ye-IBM ibonelela zombini inqanaba lomthengi kunye nesisombululo sokuhambisa esishishini. Banikezela ngothungelwano olwahlukileyo lokuhanjiswa kokuqukethwe kweShishini.
Iiakhawunti ze-Pro ziqala ukusuka kwi- $ 99 ukuya kwi-999 yeedola ngenyanga, kodwa kuphela ukuya kwisisombululo se-720p-esaneleyo kubasebenzisi abaninzi, kodwa ayizizo zonke. Izicwangciso zamashishini zivumela ukusasazwa okugcweleyo kwe-HD, kodwa amaxabiso asekwe kwizivumelwano zesiko.
Ngeeofisi eParis naseSan Francisco, iDaCast ngumnikelo ophazamisayo kwindawo yentengiso enabantu abaninzi. Unikelo lwabo lwevidiyo yi Ifomati egcweleyo, eyenzelwe wena ngazo zombini ukusasazwa okubukhoma kunye nokusingathwa kweVOD.
I-DaCast ibonelela ngeenkonzo zokusasaza bukhoma, kunye nokusingathwa kwevidiyo kwiimfuno. Iividiyo zingangeniswa naphi na ngelixa zilawula umxholo we-100% womxholo wakho. Ukongeza, i-DaCast ibonelela ngeempawu ezinjenge-paywall edibeneyo, ukhuseleko lwegama eligqithisiweyo, isithintelo sereferensi, kunye nedashboard ye-analytics.
I-DaCast iyahlula kwezinye iiplatifomu zevidiyo ngokunikezela ngeempawu eziphezulu zokuphela ngamaxabiso okhuphiswano. Oku kubandakanya usasazo olukhululekileyo, inkonzo emhlophe yelebheli kuzo zonke izicwangciso, kwaye Ukuhanjiswa kweCD yeAkamai. Inkxaso yefowuni ikwafumaneka nge-24/7 yeeprojimenti zePro kunye neePremiyamu ngokusebenzisa abasebenzi abaphakathi kwezindlu.
Ukuya kuthi ga ngokusebenziseka, iqonga le-DaCast lenziwe lalula kakhulu ekusebenziseni. Ukubonelela ngejelo elitsha lokuphila kunye nokuqalisa ukusasaza elitsha lokuphila kunokwenzeka kwimizuzu nje embalwa.
Inkonzo yenyanga ne-DaCast yile xabiso kumanqanaba amathathu. Isicwangciso se-Starter silungele abo batsha kwi $ 19 ngenyanga.
Nangona kunjalo, abasebenzisi beshishini banokufuna ukusebenzisa isicwangciso esaziwayo sePro. Kubandakanya inkxaso yefowuni kunye ne-2TB ye-bandwidth ye- $ 165 ngenyanga. Isicwangciso seNkulumbuso sibandakanya i-5 TB kwi-390 yeedola ngenyanga. Ibhendi eyongezelelweyo iyafumaneka ngesicelo sezicwangciso zenyanga.
Nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukungasayini isivumelwano, ungathenga i-bandwidth ngokwahlukeneyo ngokusebenzisa "amaxabiso emisitho" kusasazo lwexesha elinye. Le bandwidth iyasetyenziselwa ukuya kuthi ga kunyaka omnye emva kokuthenga.
Yasekwa okokuqala ngo-2007 njenge- "Mogulus," i-Livestream ngoku yenye yeenkampani ezinkulu zokusasaza ezijikelezayo. Umthombo philayo igunyazisa ezinye izehlo ezizizigidi ezili-10 ngonyaka kwaye igxile kwinkqubo ehlanganisiweyo ye-Hardware, isoftware, kunye neenkonzo zefu.
I-Livestream inikezela ngeenkonzo zokusasaza kunye nevidiyo. Lo msebenzi osisiseko uxhaswa ziingcali, iqonga lolawulo lwevidiyo, ulawulo lwabucala, kunye nokunye.
Inkxaso yezobugcisa inikezelwa nge-imeyile kubanini beakhawunti esisiseko, nangomnxeba kubasebenzisi bePrimiyamu kunye nabakwaShishini. Izicwangciso zeshishini zinokucela uncedo ngoqeqesho, inkxaso yeminyhadala, kunye nolawulo lwe-akhawunti.
I-Livestream iyazibeka ngokwayo ngokubonelela uluhlu lwezinto zokuphatheka kunye nesoftware yokusasaza bukhoma. Ezi zinto zidibanisa ukudibana kakuhle neqonga labo, zinciphisa ukujongwa komiliselo lwenkqubo yokusasaza bukhoma ukusuka kwizixhobo zokusebenza ukuya phezulu. Banikezela ngosetyenziso lwe-bandwidth engenamda, nto leyo engaqhelekanga kwishishini.
Inkonzo nge-Livestream yahlulwe yangamaxabiso amathathu aphezulu.
Isicwangciso esisisiseko sixabisa i- $ 42 ngenyanga, kwaye sibandakanya ukusasazwa kwe-ad-free bukhoma, incoko edityanisiweyo, kunye nokugcinwa okungenamkhawulo kokugcina imijelo kunye neVOD. Isicwangciso seNkulumbuso, kwi- $ 249 ngenyanga, yongeza inkxaso yokusasazeka kuFacebook Live okanye kwiYouTube, sinika imijelo ebukhoma, kunye nenkxaso yabathengi esekwe kwifowuni. Okokugqibela, isicwangciso seShishini siyafumaneka kwisivumelwano sekhontrakthi yabathengi abakhulu. Esi sicwangciso songeza inkxaso yenkxaso yemelebheli emhlophe, iinketho zokwenza imali, kunye nee-API.
Kukho nesicwangciso sasimahla esikhoyo, kodwa uninzi lweempawu azilahleki.
Ngesiseko solawulo lwevidiyo kwisoftware yabo yemithombo evulekile, Kaltura ugxile kokungafaniyo. Ngokwembali, basebenze kakhulu ngamaziko emfundo.
Ngelixa isoftware yeKaltura isimahla, ifuna isiseko seseva sokubamba nokusasaza. Njengolunye uhlobo kwimodeli yokubamba ngokwakho, iKaltura inikezela ngokusingathwa kwevidiyo esekwe ngamafu kunye neenkonzo zokuhambisa zombini i-VOD kunye nemijelo ebukhoma.
I-Kaltura iyakhanya xa kufikwa ekwandisweni. Uhlobo lwemithombo evulekileyo yesoftware yabo lithetha ukuba uluntu lwabasebenzisi lwenza kwaye babelane ngezinto ezininzi nezihlanganisi kunye nezihlanganisi.
Icala lokwandiswa kweKaltura kukuba iqonga linokudideka ukuba lisebenzise. Ngeempawu ezininzi ezahlukeneyo, kunokuba nzima kakhulu kubasebenzisi abaqalayo.
Ngelixa uKaltura engashicileli ulwazi lwamaxabiso kwiwebhusayithi yabo, ishishini lengxoxo lithumela ukuba iiplani ziqala malunga ne- $ 1000 ngenyanga kwaye enyuke apho.
Eyilwe kwi2007, Ooyala liqonga levidiyo elikwi-intanethi elijolise ikakhulu kumashishini amakhulu afuna ukwenza imali nokuhlalutya ividiyo. Basebenza nabanye abasasazi behlabathi kunye neenkampani zeendaba.
Iqonga le-Ooyala livumela abasebenzisi ukuba bathumele ividiyo kwiibango, balawule umxholo, benze imali, kwaye bahlaziye. Banikezela ngeenkonzo zokusasaza bukhoma. Iingcambu zika-Ooyala zikukusebenzisa itekhnoloji yokubona ikhompyuter ukwenza ividiyo ebonakalayo. Ukusukela ngoko, oko kugxile kubathathe kwicala lentengiso kunye nokusebenzisana.
I-Ooyala yakhiwa ngokujikeleza inani lezixhobo. Iqonga labo lesentloko livumela ukuphathwa kunye nokuhanjiswa kwevidiyo ephilayo kunye nebango, ukwenza imali, kunye neengcebiso ngomxholo. I-Ooyala Flex yimveliso yeendaba yemithombo yeendaba ezenzekelayo nolawulo, i-Ooyala Pulse yipakethi yentengiso yevidiyo, kwaye i-Ooyala IQ sisixhobo sokuhlaziya ividiyo.
I-Ooyala ayipapashi ulwazi lwamaxabiso. Iikhontrakthi zenzelwe umthengi ngamnye.
IBoston-based Ukukhanya, eyasekwa ngonyaka ka-2004, yenye yeqonga lakudala kwiividiyo ezisebenzayo. Iminikelo yabo yemveliso igxile ekugxininiseni ifu, ukusasazwa bukhoma, kunye nevidiyo ekubanjweni kwebango.
I-Brightcove inikezela ngeemveliso zemodyuli ezininzi, ezibandakanya ukubamba i-Video Cloud, ividiyo yokuphakamisa iVidiyo, Kanye ukufakelwa kwecala leseva, Live lokusasaza ividiyo, ukuhamba kwe-OTT ye-intanethi yeTV, iZencoder yokuhambisa amafu, kunye nezixhobo zokwenza imali.
Inkonzo yeBurccove iyahlulahlula kunye nohlalutyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zokuthengisa zevidiyo. Ezi zixhobo zilungiselelwe ukubamba ukukhokelela kunye nokuqonda abaphulaphuli.
Njengenkampani ejolise ikakhulu kubathengi abaphambili, iBrightcove ayipapashi ulwazi lwamaxabiso kwiwebhusayithi yabo. Nangona kunjalo, ungaqhagamshelana nesebe labo lokuthengisa ukuze ufumane isicatshulwa okanye usayine nesilingo seentsuku ezingama-30.
Imakethi yeqonga ye-intanethi iyinkimbinkimbi kwaye iphithizela. Kunokuba ngumngeni ekuvavanyeni amanqaku kunye nokwenza isigqibo sobulumko. Nangona kunjalo, ukuthelekiswa kweqonga elikwi-intanethi elikwi-Intanethi kuya kukunceda unciphise iinketho kwintengiso ngokweemfuno zakho ezithile. Kananjalo khumbula ukuba xa uthelekisa ii-OVP, unokuhlala ubavavanya ngokusebenzisa isilingo sabo simahla. Ngeli xesha ukuba awukabikho, vavanya iqonga lethu levidiyo ekwi-intanethi kwiintsuku ezingama-30 zasimahla kwaye ubone ukuba ziyahambelana kusini na iimfuno zakho zeshishini.
Kwinguqu ekhawulezayo notshintshiselwano lweTV, abadlali kunye nabanikezeli beenkonzo zeTV kufuneka bazise ukufikelela kuwo wonke umxholo kuzo zonke izikrini, nangaliphi na ixesha, naphi na, ngelixa kuncitshiswa ubunzima kunye nokuqhuba kakuhle kuwo onke amaqonga. I U-FMUSER FBE200 encoder yenzelwe ukujongana nemfuno eyandayo yokuhanjiswa kwevidiyo kwi-intanethi kunye nezixhobo zefowuni.
«Ngaphambili: Uyenza njani i-FM Transmitter Circuit Cover 3KM-5KM?
Uyisebenzisa kanjani i-encoder ye-IPTV ukwenza isisombululo esinethiwekhi sangaphakathi soSasazo lweNethiwekhi? :Okulandelayo "
Akukho ndaba zinxulumene.
Ngenisa iinkcukacha zakho